छोरी,जन्मिने बित्तिकै २० हजार | Ekhabar Nepal
समाज मंसिर २० २०७४ .
जन्मिने बित्तिकै २० हजार र स्वास्थ्य बिमाको सुविधा
बुटवल । ओमसतिया गाउँपालिकाका अध्यक्ष हिरा केवट (राहुल) गाउँमा कुनै कार्यक्रममा डुल्दै थिए, स्थानीय कुनै महिलाले परिवारमा आइपरेका पीडा सुनाइन् । छोट्की रामनगरकी ती महिलाको बेदनाले अध्यक्ष केवटको मनस्पटल नै हल्लाइदियो ।
त्यसबेला उनले आफ्नै टोलछिमेक र अन्य क्षेत्रका समुदायमा भइरहेका र दबेका कैयौं त्यसखालका घटनाहरुलाई पुनःस्मरण गरे । जुक्ति जु¥यो ः ल छोरीप्रतिको श्रद्धा जगाइहाल्ने ! छोरीलाई जन्मिनेवित्तिकै सम्मान जाग्ने खालको कुनै काम गर्ने शोंचमा उनी र उनको टिम पुग्यो । जस्को निश्कर्ष गाउँपालिकाको पहिलो परिषद्ले जन्मेर दर्ता गराउन आउने बित्तिकै छोरीका नाममा रु.२० हजार रुपैयाँ उपलव्ध गराउने निर्णय ग¥यो ।
निर्वाचित भएको मितिका आधारमा सोही दिनदेखि जन्मिएका कुनै पनि समुदायका छोरीहरुका नाममा बैंकमा २० हजार रुपैयाँ २० वर्षका लागि फिक्स डिपोजिट गर्नेगरी कार्यविधि बनाएका छन् । त्यसका लागि परिषद्बाट एक करोड २१ लाख रुपैयाँ गाउँपरिषद्बाट छुट्टाइसकेको सोही गाउँपालिकामा रहेको साना किसान कृषि सहकारीसित सम्झौताको प्रक्रिया अगाडि बढेको अध्यक्ष केवटले मेचीकालीलाई जानकारी दिए ।
उक्त गाउँपालिकामा करिब ३७ हजार जनसंख्या छ । जसमा महिलाको संख्या धेरै छ । ‘यसैपनि मधेशका समुदायको बाहुल्य रहेको र खुला सीमा भएको क्षेत्र हो वारिपारि विहेबारीसमेत सम्बन्ध छन’ अध्यक्ष केवटले भने–‘छोरीप्रतिको समुदायको धारणा र भावना परिवर्तन गर्नका लागि पनि केही न केही रचनात्मक काम गर्नैपर्ने छ ।’
हाटी फर्साटिकर, वसन्तपुर, पड्सरी, छोटकीरामनगर र पट्खौली गाविसहरु जोडेर ओमसतिया गाउँपालिका बनेको हो । यहाँका कैयौँ समुदायमा अहिले पनि बालबिबाहको प्रवृत्ति रोकिएको छैन् ।
कम्युनिष्ट स्कुलिङबाट राजनीतिमा होमिएका केवट र उनका केही सहकर्मीहरु समुदायमा रहेका लैगिक हिंसा रोकथाम र न्यूनीकरणका विषयमा छलफल हुन्थ्यो । तर, यस्ता छलफल कुनै टुंगोमा पुग्दैनथे । जब केवट गाउँमा छोट्की रामनगरकी ती महिलाका पीडा सुन्नपुगे तब उनले नीति निर्माण तहमा रहेको फाइदा नै उठाएर त्यस्तो निर्णय गराए ।
यस्तै श्रद्धापूर्वक निर्णय रुपन्देहीकै सियारी गाउँपालिकाले पनि गरेको छ । गाउँपालिकाको साउनमा बसेको परिषद् बैठकले जन्मिनेबित्तिकै छोरीको जीवन बिमा गर्ने निर्णय गरेको गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष अमृता गुरुङले जानकारी दिइन् । उनीपनि कम्युनिष्ट स्कुलिङकी नेत्री रहेकाले महिला समानता र हक अधिकारका बारेमा खुबै चिन्तित हुन्थिन् । जब उनी गाउँ सरकारकी उपप्रमुख भएर डुलिन्, तब सोंच बन्यो छोरीका लागि केही न केही अवस्य गर्ने !
‘मनमोहन अधिकारीको पहिलो कम्युनिष्ट सरकारले सुरु गरेको सामाजिक सुरक्षा भत्ताका कार्यक्रमले उतिबेलैदेखि प्रभावित भएकी थिएँ’ उपाध्यक्ष गुरुङले भनिन्–उहाँकै कार्यकर्ता भएका हिसाबले पनि केही न केही समुदायका लागि गर्नुपर्छ भन्ने जाग्यो र यस्तो निर्णय गरियो ।’
गाउँपालिकाले जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएको मितिदेखि नै जन्मिएर दर्ता गराउने छोरीहरुको जीवन बिमा गरिदिने निर्णय गरेपछि उनीहरुलाई धेरैतिरबाट स्याबासीका फोनहरु आएका थिए । यो गाउँपालिकामा करिब ३८ हजार जनशंख्या छ । ती मध्ये यहाँपनि धेरै जनसंख्या महिला कै छ ।
यो गाउँपालिका साविकका चिल्हिया, मैनहिया, हर्नैया, दयानगर र पश्चिम अमुवा गाविसहरु मिलेर बनेको हो । गाउँपालिकाका प्राविधिक किरण क्षेत्रीले बिमा पोलिसी र बिमा कम्पनीसित सम्झौताको प्रक्रिया अगाडि बढेको र अब यो चुनावपछि कामलाई टुंगोमा पु¥याइने बताए ।
गाउँपालिकाको यस्तो निर्णयले बालविवाह रोक्नेदेखि लैंगिक हिंसा कम गर्नसमेत मद्दत पु¥याउने ओमसतिया गाउँपालिकाका स्थानीय बुद्धिजीवी तथा अगुवा जगदिश खरबिन्दले बताए । उनले भने–‘२० वर्षसम्म छोरीको नाममा राखिएको रकम तीन लाखसम्म पुग्छ जुन रकमले उच्च शिक्षा अध्ययनदेखि विवाह खर्चकोसमेत जोहो हुन्छ ।’ गाउँपालिकाले २० वर्षभन्दा कम उमेरमा विवाह गरेर जाने वा आफै भाग्ने कुनै पनि छोरीका लागि भने यो रकम दिन नमिल्ने गरी कार्यविधि बनाइरहेको छ । गाउँपालिकाले विपन्न समुदायका लागि समेत औषधोपचारमा प्रतिव्यक्ति १५ हजार रुपैयाँ सम्म सहयोग उपलव्ध गराउन सुरु गरेको छ ।
आउँदो २० वर्षमा महिला भन्दा पुरुष धेरै हुने निश्चित
गैरसरकारी संस्थाले हालै गरेको सर्वेक्षणअनुसार मुलुकमा पछिल्ला केही वर्षयता छोराको तुलनामा छोरीको संख्या कम हुँदै गएको छ । लिङ पहिचान गरेर भ्रूण हत्या गर्ने, एउटा मात्रै सन्तान जन्माउने जस्ता गलत प्रवृत्तिका कारणले आउँदो २० वर्षमा यस्तो नतिजा आउने विज्ञहरुको दाबी छ । विज्ञहरुसहितको एक टोलीले हालै गरेको अध्यय्नमा छोरी जन्माउने भन्दा छोराकै पछि दौडिनेहरु धेरै रहेकाले आउँदो २० वर्षमा छोरीको तुलनामा छोरा धेरै हुने दाबीसहितको रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको थियो । ‘नागरिक परिवार’ नामको संस्थाले हालै मुलुकभरिका ३२ जिल्ला, ती जिल्लाका सदरमुकाम र ४९ वटा नगरहरूको लैंगिक आधारमा जनशंख्याको सुक्ष्म अध्यय्न गरेको थियो । सोही अध्यय्नका क्रममा १४ वर्ष उमेर समूहका छोरा–छोरीहरुको मात्रै तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा सबै जसोमा छोराहरुको संख्या धेरै देखिन्छ । ४ वर्षसम्मको उमेर समूहमा उच्च सेक्स रेसियो हुने १० नगरहरूमा सबैभन्दा अगाडि पाल्पाको तानसेन रहेको थियो भने त्यसपछि बुटबल ।
अध्यय्न गरिएका ३२ जिल्लाको समग्र तथ्याङ्क केलाउँदा ४ वर्षसम्मको उमेर समूहमा केटीहरूको दाँजोमा केटा धेरै हुने जिल्ला ९ वटा रहेको सो संस्थाको रिर्पोटमा उल्लेख छ । जसमा भक्तपुर, काठमाडौँ, कास्की, अर्घाखाँची, रुपन्देही,स्याङ्जा, कञ्चनपुर,सुर्खेत तथा बाग्लुङ र कैलाली रहेका छन् । उक्त संस्थाले रिपोर्ट तयार पार्दासम्म (वल्र्ड पपुलेसन क्लकअनुसार) नेपालको कुल जनसंख्या २ करोड ८५ लाख १३ हजार ७ सय छ । जसमध्ये पुरुष १ करोड ३८ लाख १६ हजार ४७२ छन् भने महिला १ करोड ४६ लाख ९७ हजार २२८ महिला छन् । यसरी हेर्दा कुल जनसंख्यामा महिलाको संख्या धेरै देखिन्छ ।